SANN MAW: How to select the mobile phone network operators for Myanmar? Part -1 and2---- by Sann Maw
How to select the mobile phone network operators for Myanmar? Part -1 and2---- by Sann Maw
နုိုင်ငံခြား က ဖုန်း အော်ပရေတာ ၂ ခု ကို ဘယ်လုို ပုံစံနဲ့ ရွေးခဲ့သလဲ ဆုိုတာ အကြမ်းဖြင်း ပြောကြည့်ရအောင်။
ခု တလော အွန်လုိုင်း မှာ တွေ့နေတဲ့ ပြောကြားချက်တွေ အရ ဖုန်း company ၂ခု ကို ဘက်လုိုက်ရွေး မရွေး သိရအောင် ဆက်သွယ်ရေး ဝက်ဘ် ဆုိုက် မှာ ဝင်ကြည့်လိုက်တော့ ရွေး ခဲ့တဲ့ အဆင့်တွေကို English လုိုရေးပီး တင်ထားတာ တော့ တွေ့တယ် မြန်မာလို မတွေ့ လို အကြမ်းဖြင်း ဘာသာပြန်ပီး တင်ပေးလုိုက်တယ်။ သိလုိုသူများ ဖတ်ကြည့်ကြပါကုန်။
ပထမ…အစိုးရက..ဖုန်းoperator လုပ်ငန်းအတွက် ၂၀၁၂ ကုန်ခါနီး မှာ တင်ဒါခေါ်ဖုို့အတွက် စိတ်ဝင်စားသူ company တွေကိုဖိတ် ခေါ်ပါတယ်။ လုပ်ကို်င် ခွင့် ရတဲ့ company အနေနဲ့ ပထမအဆင့် ၁၅ နှစ် လုပ်ခွင့်ရမယ် ။ ပထမ ၁၅နှစ် လုပ်ခဲတာကို ကြိုက်တယ်..စည်းကမ်းချက်နဲ့ ညီညွှတ်တယ်ဆုိုရင် ၁၅နှစ် လုပ် ပီးရင် အနည်း ဆုံး၁၀ နှစ် သက်တမ်း ထပ်တုိုးလုို့ရမယ်။ စု့စုပေါင်း ၂၅ နှစ်ပေါ့….အဲ့ဒါပီး သွားရင် နောက်ထပ် သက်တမ်း တုိုးတဲ့ ဟာတော့ ရေးထားတာမတွေ့ရဘူး..
အဲ့ဒီ ဖိတ်ခေါ်ချက် ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ နုိုင်ငံတကာ က..ဖုန်း operator company ပေါင်း ၉ ၁ ခု က ဆက်သွယ်လာတယ်… အဲ့ဒီဆက်သွယ်ချက်တွေကို ဖေဖေါ်ဝါရီ ၈ ရက် ၂၀၁၃ နေ့အထိ လက် ခံခဲတယ်..အဲ့ဒါ ပီး တော့ ပထမ ဖိတ်ခေါ်တဲ့ အဆင့် ပီး သွားရော….
ဒုတိယ အကြိုရွေးချယ်ပွဲ အကြောင်း ဆက်ရေးပါ့မယ်..
မှတ်ချက်၊ ၊ http://www.mcit.gov.mm/ မှာ တင်ထားတဲ့ အချက်အလက် တွေကို မှီငြမ်း ပီး ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆုိုပါသည်…ပညာရပ်ဆုိုင် ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အတိအကျ သိလိုပါက..အထက်ပါ အင်တာနက် ဝက်ဆုိုက်တွင် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှု့ လေ့လာကြပါကုန်၊
ဒုတိယအဆင့် အကြိုရွေးချယ်ပွဲ.. (how to select the mobile phone network operators for Myanmar? ---- by Sann Maw)
ဒုတိယအဆင့် အကြိုရွေးပွဲ ဆုိုတာကို ဘာလုို့ ထား ထား ရသလဲဆုိုတော့…. Mobile phone operator လုပ်ငန်းဆုိုတာ.. လုပ်ချင်တဲ့ သူတုိုင်း ထ လုပ်လို့ဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်း မဟုတ်ပါဘူး.. ဒီလုို လုပ်ငန်း မျိုး လုပ်ဖုို့အတွက်..
၁။ လုပ်ငန်းစတင် တဲ့ အချိန်ကတည်း က စပီး ဖုန်းခေါ်တဲ့ service စပေးနုိုင်တဲ့ အချိန်အထိ ဒေါ်လာသန်းပေါင်း များ စွာအကုန်အကျခံပီး အရင်ကြိုတင်ပီး ရင်းနှီးထားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုက်ဆံပြန်မဝင်ခင်၊အမြတ်မပေါ်ခင် အချိန် တွေအတွက် အချိန် အတိုင်းအတာတခုအထိ ရင်းနှီး ထားဖို့ (capital ) အရင် အနှီး အတွက် ပိုက်ဆံလဲ ရှိရမယ်။ မှတ်မိကြဦး မလားမသိဘူး..အရင် မြန်မာ ဆက်သွယ်ရေး က.ဖုန်းကဒ်တွေကို..၁၅ သိန်း .. ၅ သိန်း ၂ သိန်း ခွဲ ..၂ သိန်း နဲ့ ရောင်းခဲ့တယ်ဆုိုတာ သူရင်း နှီး ထားတဲ့ အရင်းအနှီး အတွက်..ဖုန်းခေါ်ခ တွေက နေ ပြန်ရမှာကို မစောင့်နုိုင် လို့ အရင် အနှီး မြန်မြန်ပေါ်အောင်..ဖုန်း ဆင်း ကဒ်တွေကို ဈေးဈေး ကြီး ကြီး နဲ့ ပြန်ရောင်း စားတာပဲ..ဖြစ်သင့် တာကတော့ အဲ့လို ဈေး ကြီး ကြီး နဲ့ ပြန်ရောင်း စားထားတဲ့ အတွက် အရင်း အနှီး တချို့ ကြေသွားပီ ဖြစ်တဲ့ အတွက်..ဖုန်းပြောခတွေကို လျော့ပေးတာမျိုး လုပ်သင့်တယ်။..သို့သော်လဲ အဲ့ဒီလုို ဈေး လျော့ပေးတာမျိုးဟာ ခုချိန်ထိဖြစ်လာတာတော့ မတွေ့ရသေးဘူး.. ရသလောက် ဝိုက်တယ်ဆုိုတာ မျုိုးလားတော့ မသိ….နောက်ကျရင်တော့ အပြိုင်အဆုိုင် တွေ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်..ဒီလုိုပုံစံမျိုးနဲ့ ဆက်ပီး စခန်းသွားလုို့ မရတော့ဘူး ဆုိုတာတော့အနှေးနဲ့ အမြန်..သိလာမယ်လုို့ယူဆရတာပဲ…ခုချိန်ထိကတော့.ဖုန်းခေါ်ခတွေ..ဆားဗစ်တွေ .ထူးထူးခြားခြား ကောင်းလာအောင် ပြု့ ပြင်တာတော့ မတွေ့ရသေးဘူး..ထားပါတော့ ရေးရင်းနဲ့ ဘေးရောက်သွားတယ်… နောက် နံပါတ် ၂ အချက်..က.
၂။ အဆင့်မြင့် နည်း ပညာ တွေကို သုံးထားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်.. နည်း ပညာပိုင်းလဲ ဖြည့်ဆည်းပေးနုိုင်ရမယ်။ အသုံးချနိုင်ရမယ်။လုပ်ငန်း လုပ်ဖူးတဲ့ လုပ်နေတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေလဲရှိရမယ်.. ခု နောက်ပုိုင်း က..2G.3G …4G ဆိုတာတွေ ပေါ်လာပီဖြစ်တဲ့အတွက်….နည်း ပညာမြင့်တာကို သုံးနုိုင်လေ ပိုကောင်းလေပေ့ါ.. ဒီနေရာမှာ မေး စရာရှိတာက..အဲ့ဒီ နည်း ပညာတွေက အစဉ်အတုိုင်း သွားစရာလုိုသလားဆုိုတာ..ပဲ..မြန်မာပြည်အနေနဲ့ ဆုိုရင် မလိုဘူးလုို့ဖြေလုို့ရတယ်။ ဘာလုို့လဲဆုိုတော့..မြန်မာပြည်မှာ က… mobile phone network က အရမ်း သေးနေသေးတယ်ဆုိုတော့ ရှိပီးသား phone network ပေါ်မှာ ထပ် တည် တာ မဟုတ် ပဲ..အကုန်လုံးနီးပါးက..အသစ် အသစ်တွေ တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ခုလောလောဆယ် ရှိပီးသားမြန်မာ ဆက်သွယ်ရေး က ဆာဗစ်ပေးလက်စ (2G အများစု ..နောက် 3G service က နဲနဲ ) က နေ.. 2.5G…. 2.75G….... 3G တွေ မခံပဲနဲ့ လည်း 3.5G HSPA+ .. 4G LTE စတာတွေကို တခါတည်း အဆင့်မြင့်ပီး တန်းပေး နှုိင်အောင် လုပ်ပေးလုို့ရတယ်.. လွယ်လွယ်ပြောရရင်.. ရုပ်မြင်သံကြား တီဗွီတွေ ပေါ်တုန်းက..မြန်မာနုိုင်ငံက တခြားနုိုင်ငံတွေထက် နောက်ကြပီး လုပ်ဖြစ်တော့..(တခြားနုိုင်ငံတွေမှာက အစဉ်လုိုက်.. black and white TV system.. နောက် colour TV system အဲု့လုိုမျိုးအစဉ်လုိုက် သွားရပေမယ့် )..မြန်မာပြည်အတွက် black and white TV system ကို မသုံးတော့ပဲ..colour TV system ကို တန်းသုံးလုို့ ရသလိုမျိုးပေ့ါ ။။ တကယ်လို့ system အဟောင်းက ရှိနေပီးသားဆုိုရင်..phone company တော်တော် များများက..မလုိုအပ်သေးရင်..အရင်ရှိပီးသားအဟောင်းကို ပဲဆက်သုံးချင်ကြတယ်..ဘာလုိ့လဲဆုိုတော့အဟောင်းကနေ အသစ်ကို အဆင့်မြင့် တယ်ဆုိုရင်..ရှိပီး သားအဟောင်းတွေထဲက ဆက်သုံးလို့ မရတာအတော်များများ က..လွှင့်ပစ်လုိုက်ရတာဆုိုတော့ အသစ်ကို တုိုက်ရိုက်လုပ်ရတာထက် စာရင် စုစုပေါင်း ကုန်ကျစရိတ်က ပိုများပါတယ်။ မြန်မာပြည်အတွက် ကတော့ အဲ့လိုမျိုး အဟောင်းကနေ အသစ်သွားတာမျိုး လုပ်စရာ မလိုတော့ တဲ့အတွက် ..အဆင့်မြင့် နည်း ပညာကို သုံးပီး service ပေးဖို့အတွက် ဖုန်း company တွေအနေနဲ့..ကုန်ကျစရိတ် က မလိုပဲ ၂ခါကုန် မဖြစ်တော့ဘူးလုို့ အကြမ်း ဖြင်းအားဖြင့် ပြောလုို့ရတာပေ့ါ.. နည်းပညာပိုင်း ဆုိုရာမှာ တော့ 4G သုံးမယ် မသုံးဘူးဆုိုတာတင် မကဘူး..တခြား ကြည့်စရာ အချက်အလက်တွေလဲ အများကြီး ရှိတာပေ့ါလေ။။ အဲ့ဒါကတော့ ဆက်သွယ်ရေးwebsite မှာ အသေးစိတ်ရေးထားတာ မတွေ့ရဘူး။ တင် ဒါတင်မယ် ဆုိုတဲ့ company တွေ အနေနဲ့ ကတော့ သိနုိုင်ပေမယ့်..အတွက်..အပြင် လူတွေ အနေနဲ့ တိတိကျကျတော့ မသိရဘူး..
အဲ့ဒီေ တာ့ အထက်က တင်ပြခဲသလို နည်းပညာ တွေ အရင်းအနှီး တွေ အတွေ့အကြုံတွေ ရှိမရှိဆိုတာကို ဘယ်လုို စစ်ဆေးမလဲဆုိုတာ လုိုလာပါပီ။ ဒါကို သိနုိုင်ဖုို့အတွက်..company တွေရဲ့ လုပ်ငန်း လုပ်ဖူး တဲ့ နောက်ကြောင်း ရာဇဝင်ကို စစ်ဆေးခြင်း အားဖြင့် သိနို်င်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ အောင်က နံပါတ် ၃ အချက်ပါပဲ.
၃(က) ။ ဒါမျိုး mobile phone network operator လုပ်ငန်း ကို အနည်း ဆုံး လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ် ကတည်း က အောင် အောင်မြင် မြင် လုပ်နေတဲ့ company လဲဖြစ်ရပါ့မယ်။ အဲ့လုို အောင်အောင် မြင် မြင် လုပ်နေတယ် ဆုိုရမှာ..အဲ့ဒီ company ဟာ.. သူ့မိခင်နုိုင်ငံမှာ..mobile phone network operator လုပ်ငန်းရဲ့ အစုရှယ်ယာ အနည်း ဆုံး ၅၀.၁% ကို ပိုင်ဆုိုင်ထားရမယ်.. နောက် mobile phone customers ပေါင်း ..အနည်းဆုံး ၄ သန်း ကျော် ကို ဝန်ဆောင် မှု့ ပေးနေတာ ဖြစ်ရမယ်။ revenues (ဝင်ငွေ) အနေနဲ့ မနှစ်က တနှစ်ကို US$ သန်း ၄၀၀ ကျော် ဝင်ငွေရှိရမယ်..
၃(ခ)။ ဒါတင် မကသေးပါဘူး… အဲ့ဒီ company ဟာ.. သူ့နုိုင်ငံတင် မက..တခြား နုိုင်ငံခြား တခုခုမှာလည်း.. ဒီလိုမျိုး mobile phone network operatorလုပ်ငန်းကို အောင် အောင် မြင် မြင် လုပ်နေတဲ့ company မျိုး ဖြစ်ရပါမယ်။ အောင်အောင် မြင်မြင်ဆုိုရာမှာ.အဲ့ဒီ company ဟာ..တခြား နုိုင်ငံကmobile phone လုပ်ငန်း မှာ ပါတဲ့ သူ့အစုရှယ်ယာဟာ အနည်း ဆုံး ၃၀% နဲ့ အထက် ဖြစ်ရပါမယ်။ အနည်း ဆုံး mobile users ပေါင်း ၁သန်းနဲ့ အထက်ကုို ဝန်ဆောင် မှု့ပေးနေတာဖြစ်ရပါမယ်။။ ဒီ ၃(ခ) အချက်က ဘာလုို့ လိုတာလဲဆုိုရင်..နုိုင် ငံတခုနဲ့ တခု ယဉ်ကျေးမှု..ဝင်ငွေ..ဘာသာစကား..ပညာရေး..လူမှူ့ရေး..ဘာသာရေး စတာတွေက မတူတဲ့အတွက်..company တခုဟာ မိခင် နုိုင် ငံမှာ တင် မက ဘူး..တခြား လူမျိုးဘာသာ ယဉ်ကျေးမှူ့မတူတဲ့ နုိုင်ငံခြားတွေမှာ ပါ..ဒီလုိုလုပ်ငန်းကို အောင် အောင် မြင် မြင် လုပ်နေသလား ဆုိုတာ သိဖို့ လုိုပါတယ်..ဒါကြောင့် ၃(က) အချက်သာ မက.. ၃(ခ) အချက် ကိုလဲအောင်အောင် မြင်မြင်လုပ်နေတယ်ဆုိုတာ သိဖုို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဆုိုတော့ တုိုတုိုပြောရရင်..ဒီ အချက် တွေနဲ့ ကိုက် တဲ့ company တွေကို တုိုက် စစ် လုိုက်တော့ company ပေါင်း ၂၂ ခု က မြန်မာပြည်မှာ လုပ်ငန်း လုပ်မယ် ဆုိုရင် လုပ် လုို့ ရနုိုင် တယ် ဆုိုတာတွေ့ရှိရပါတယ်… အဲ့ဒီ အဆင့်ကို ၂၀၁၃ အေပရယ် ၁၁ ရက်နေ့မှာ အပီး သတ်နုိုင် ပီးတော့ အကြို အရည်အချင်း နဲ့ ကိုက် ညီတဲ့ company ပေါင်း ၂၂ ခု ရဲ့ စာရင်း ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ပြောချင်တာက.. စစချင်း company 91 က လုပ်ငန်း လုပ်ရန် စိတ်ဝင်စားတယ် ဆုိုသော်လည်း .. ၂၂ ခု က ပဲ..နည်း ပညာ…ငွေကြေးအရင်းအနှီး …အတွေ့အကြုံ စတာတွေ နဲ့ ကုိုက် ညီပီး..အဲ့ဒီ ၂၂ခုသော company တွေကပဲ..mobile phone network operator အတွက် tender တင် သွင်း ခွင့် ရှိတယ် လို့ ပြောလုို့ ရပါတယ်။..ဒီနေရာ မှာ ဘာလုို့ လုပ်ချင် တဲ့သူတွေ အကုန်လုံး ကို ပေး မလုပ်တာလဲ..လုပ်ချင်တဲ့ သူတွေ အကုန်လုံး ကို ပေးလုပ်လုိုက်ရင်..အပြိုင်အဆိုင် များလာပီး ဈေးတွေလဲ..ပိုကျ မသွားနုိုင်ဘူးလား ဆုိုတာ မေးစရာပေါ်လာပါတယ်။။ အဲ့ဒါအတွက် အဖြေကိုတော့ နောက် တပိုင်းမှ ဆက်ကြတာပေ့ါ ဗျာ။ ဟုတ်လား..
မေးစရာ ရှိရင် comment ပေးထားခဲ့လိုက်ပါ..နောက် အပိုင်း တွေမှာ အစဉ်ပြေသလို ထည့် ဖြေပေးသွားပါ့မယ်။
Posted by Admin at Sunday, June 30, 2013
How to select the mobile phone network operators f...